USB 4 ayaa dhawaan soo socda, laakiin sida loo wajaho miraayada USB? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » TECH & TELECOM USB 4 ayaa dhawaan soo socda, laakiin sida loo wajaho miraayada USB?
USB 4 ayaa dhawaan soo socda, laakiin sida loo wajaho miraayada USB?
USB-IF (Hirgelinta-Forum) wuxuu ku dhawaaqay qeexitaanka USB 4.0 kaas oo loo yaqaan USB 4. Hadafkani waa mid heer sare ah inkastoo guuldarrada aan la dafiri karin ay si kastaba ha ahaatee abuurtay waxyaabo badan oo wareersan maanka illaa iyo markii la aasaasay. Sidee loo arkaa si cad in si fiican loo isticmaalo?
Sanadihii 20 ee taariikhda, tartame toos ah ayaa noqday ... maqnaanshaha mashiinka!
Maanta waxay iibisaa wax ka badan 4 billion USB (Xirfad Universal Serial Bus) sannadkii oo dhan. Waxay noqotay qiyaastii kaliya, isku xiraha aan lakulmeen oo kaliya oo tartanka tooska ah uu hadda yahay: maqnaanshaha xidhiidhiye. Kuma yaabi doonno taariikhda naxdinta leh iyo taariikhda naxdinta leh iyo kakoobida badanaa isku-buuqsan (aragtida isticmaalaha ugu dambeeya) marka aynu ognahay in badanaa ay ku kacday Intel, mid ka mid ah boqorrada madax-banaanida tiknoolijiyada, taas oo ah waqti genius ah, ayaa abuuray ololahan caanka ah ee "Intel Inside".
Waayo, kuwa ay bilaabeen in ay isticmaalaan computer ah in sanadaha 90 ama ka hor xidhiidhka ka ahaa madax xanuun dhab ah oo god faylalka tacliimeed, iyada oo daraasiin Xidhiidhiyayaasha kala duwan iyo is gayin, oo dhan leh magacyo kala duwan (PS / 2, taxanaha, din, dekedda Apple Bus, SCSI, isku midka ah ...) ee dhammaan aaladaha in ugu cuslaataan laga yaabaa in ay PC ka (keyboard, mouse, makarafoon, ku hadla, drive dibadda, printer, scanner, camera bandhigayaa sawiro, kamaradaha, iwm ... ). Intaa waxaa dheer, dhowr saarayaasha, oo ay ku jiraan Apple, dhigay iyaga u gaar ah in aynan Xidhiidhiyayaasha kale, taasoo celin user ee xidhan iyo qaalisan dunida oo dhan.
1996 Xili hore, oo isu keenaya 10 dhismayaasha ku wareegsan oo 4 tan iyo markii la waayay, Intel wuxuu ku dhawaaqay USB sidii mid furan oo loo geliyay gacanta " Forum Implementer USB Si loo ansixiyo badeecada wax soo saar kasta iyo hubinta shuruudaha. USB-IF wuxuu leeyahay xubnaha 1 000 maanta.
The version 1.0 USB marka hore, ku salaysan 2 qaaday A iyo B inaynu naqaan (eeg sawiro) ogol yahay in ay gudbiyaan xogta ee 2 macnaha ka dhexeeya qalab iyo computer ka xawaare ah 1.5 Mbit / s, ka dibna 12 Mb / s oo la sii daayay 1.1 USB ugu horeysay ee 1998, waxaana loo oggol yahay in ay si toos ah ugu darsato qalabka ku xiran. Kaliya khasaare, version ugu horeysay soo shaqeeyay kaliya qeybtii-dabaq, waa in la yidhaahdo, ka wareejinta xogta la dhigay mid ka mid jihada waqti.
Isbarbardhiga xawaaraha ee wareejinta
2000, version USB 2.0 oo la yiraahdo HighSpeed, ayaa ku deeqay 480 Mbps. Ka dib markii qaar ka mid ah updates farsamo muhiim ah si loo fududeeyo ansaxinta ballaaran ee soo socda 2011 USB3.0 yeedhay SuperSpeed ​​kuwaas oo xawaare gaadho max 5 Gigabit / s. La qabsashada dib u noqoshada USB 1.1 iyo USB 2.0 waa la hubiyaa, marka laga reebo xawaaraha gudbinta. Badeecadaha qalabka badankood ayaa qaatay, ulaha kaydinta USB waxay sii kordhinayaan horumarka kaydinta Flash, shirkadaha taleefannada gacanta ayaa bilaabay inay isticmaalaan USB si ay u soo qaadaan batariyada, shiidaa kasta oo kasta oo PC ah iyo qalab qaadatay USB, wuxuu ku dhawaad ​​ku guuleystay inuu kufsado. Laakiin si ay u fududeeyaan in ay korsato on tiro badan oo ah qalab, USB-HADDII ayaa si weyn u kala duwan, xirayaasha iyadoo la abuurayo mini iyo Xidhiidhiyayaasha USB micro for USB iyo 2.0 3.0. Xidhiidhiyaha 3.0 USB A iyo B waxay ku xiran yihiin kuwa USB 2.0 A iyo B laakiin waxay leeyihiin xariijin buluug ah si ay u kala soocaan.
Mindi Swiss ah ee isku xirnaanta horumarka, ugu dambeyn caqli ...
Danta xiisaha ee USB waa kharash aad u hooseeya maaddaama liisamada ay bilaash yihiin, koontaroolkana waxaa lagu dhejin karaa jeebad. Caqabadda keliya ayaa ah in la helo shahaadada ay bixiso USB-IF. Qiimaha hooseeya wuxuu u fasaxay inay ka baxdo inta badan tartamayaasheeda sida FireWire oo taageeray Apple, taasoo farsamo ahaan u dhiganta balse waxay ku kacday waqtiyada 10 qaali.
Tilmaamaha ugu muhiimsani waa:
USB wuxuu ku tiirsan yahay isku xiraha halbeegga ee kombiyuutarka. Hase yeeshee dhab ahaantii, xiriiriyayaasha kala duwan ayaa ku sii badiyay. Hadda waxaa jira darsin, kuwaas oo mararka qaarkood abuura dhibaatooyin xiriir. USB 4 waa inuu wax ka qabtaa dhibaatadan.
USB waa "Beddelaad kulul" taas oo macnaheedu yahay in qalabka la isku xidhan karo oo la joojin karo iyada oo aan wax hor-istaagin ah sida joojinta codsiga, xiridda qalabka ama dib u habeynta.
USB waa Plug iyo Play: Waxaa taageera OS inta badan. OS ayaa qeexaya qalabka, si toos ah u rakibayaa oo u xareeya darawalada lagama maarmaanka ah marka uu isticmaalo qalabkiisa.
USB waa xawaaraha sarreeya: Waxay u socon kartaa 20G mar labaad halkii ay ku xiran tahay nooca USB. USB 4 waxay ku siineysaa 40 Gigabits halkii labaad.
USB waa la ballaadhin karaa. Baska kaliya ee USB-ga ee kombiyuutarka ayaa heli kara qalabka 127. Dhinaca kale, qalab kasta ayaa loo qoondeeynayaa isku-fidin isku mid ah oo abuuri kara qalab adag. USB 4 wuxuu abuuri doonaa maareynta jilayaasha firfircoon ee qalab kasta oo isku xidhan.
USB wuxuu ku xiran yahay USB 3.2 Gen 2 ilaa 2.0, laakiin xawaaruhu wuu kala duwanaan karaa 20Gbps ilaa 480 Mbps iyada oo ku xiran nooca iyo xiriiriyayaasha. USB 4 waxay ku tiirsanaaneysaa isku xiraha guud ee isku xira: USB-C.
USB waxaa ku shaqeeya baska: wuxuu awood u siinayaa dhamaan qalabka. Waa daruuri lagama maarmaanka u ah dhaqdhaqaaqa, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa in ay si toos ah ugu iibsato qalabka korontada isla markaana ay ku siiyaan adegyada korantada isla markaa ay bixiyaan macluumaadka wareejinta.
USB wuxuu leeyahay fiditaan sida Wireless ama On Go (OTG) kaas oo u oggolaanaya inuu isku xiro laba qalab oo aan ka helin kombiyuutar iyo Gaadiidka Awoodda ee siin kara awoodda 100W.
USB waa sahlan tahay in la isticmaalo in la ogaado in hawlaha badankood lagu xalliyo OS-ga kombiyuutarka martida loo yahay.
USB waa mid fudud oo aan qaali ahayn si loo fuliyo.
Duufaanku waa soo kordhay markii Intel iyo Apple ay sii daayaan Thunderbolt / Lightning
Imaanshada USB 3.0, si kastaba ha ahaatee, waxay la jaan qaadi doonaan kala-duwanaansho qaar oo bilaabay inay dhib ku kiciyaan. Sayidka ee 2009 -2010, malaha si ay u bixiyaan kale si Apple arkay ay FireWire (IEEE1394) boosas maxaa yeelay, aad u qaali ah oo aan joogto ahayn u dhexeeya nooc oo kala duwan, Intel bilaabay mashruuc la yidhaahdo Fiinta Light oo ujeedadiisu ku daray optics fiber xiritaanka xiriirka baahida weyn ee wareejinta xawaaraha sare ee kombiyuutarka. Ugu dambeyntii ku dhawaaqay sida qaylo, la xiriir gaar ahaa oo loo isticmaalo oo kaliya by Apple on MacBook sida hillaac u. Laakiin marnaba isticmaali doonaa fiber indhaha, inkasta oo ay soo bixiyey talooyin xawaaraha xiriir si fiican kor ku xusan in USB 2.0 iyo 3.0 USB weli sanduuqyada.
Wakhti yar ka dib 2011 ayaa ka soo baxaya 3.0 USB oo la yidhaahdo SuperSpeed ​​iyada oo xirmooyinkeeda buluuga ah ee ku xiran. Wakhtigan, 3.0 USB xawaaraha xayaysiinayaan ahaa 5Gbps Thunderbold halka Intel hore u bixisaa 10Gbps. Xilliga xagaaga waxaa ku dhawaaqay USB 2013 3.1 farsamada yaabka leh laygu qaadataa magaca USB Gen 3.1 1 halka ku dhowaad waqti isku mid ah lagu qeexay sooca ah ee USB SuperSpeed ​​a + yeedhay USBC 3.1 Gen2 in wareejin karaan xogta ilaa 10 Gbps. Labaduba waxay ku kala duwanyihiin xogta qawaaniinta oo kor u qaadaysa xawaaraha Gen2.
Kadibna imaado USB-C iyo habab kale
Dhawr bilood ka dib sannadkan 2014, USB-HADDII qeexayaa isku xira cusub oo lagu magacaabo USB-C isku xira labada dhinac qadaadiic, halka nooca dekedaha USB A xirmaan kaliya jihada gaar ah. USB-C wuxuu la shaqeeyaa dhammaan xiriiriyayaasha USB-ka ee laakiin dhammaantood awood uma laha inay fuliyaan heerka iyo soo-saaraha. Support of "kale" waxa la siiyaa caan ah USB-C u ogolaanaya in ay u adkeysan maamuuska USB iyo non-USB, Delivery xoogga Ilaah, dekedda bandhigay for gudbinta maqal video ama qaylo calaamadaha ah.
Bixinta Awoodda waxay u ogolaataa lacag caqli ah oo ku saabsan 2 dareenka awoodda 100W, oo leh qalab lagu dabaqi karo, laakiin waxay ka imanaysaa ikhtiyaarka kor ku xusan awoodaha awooda awoodda ee heer kasta oo USB ah. Bandhigga Muuqaalka (DP) waxaa lagu sameeyey 2006 by VESA si loo bedelo DVI iyo VGA iyo FPD Link, tan dambe ayaa badanaa loo adeegsadaa baabuurka si ay u noqoto mid bilaash ah. DP hadda waa qaab bedelaad oo caan ah USB-C maxaa yeelay waxay bixisaa maqal iyo maqal muuqaal ah oo loo adeegsado qalab aan ku xirneyn DP ama HDMI gaar ah.
USB-C ka dibna wuxuu bedelayaa signal qalabka / muuqaalka ah ee DP / VGA ama HDMI kaas oo lagu soo bandhigi karo telefishanka ama kormeerka. Apple wuxuu u adeegsadaa dhammaan Macsidiisa tan iyo 2013. Sidaas daraadeed isticmaalka xidhiidhiyaha USB-C-macnaheedu ma ahan in loola jeedo iswaafajinta habka USB-ka kaas oo taageerada ay tahay ujeedada shirkadaha wax soo saarka ah ee u saamixi kara kaliya qaabka kale, ama dhowr dhowr ah oo aan ahayn USB ama USB. Tani waxay u baahan tahay taxadar gaar ah isticmaalka isagoo ogsoon in qaar ka mid ah soo saarayaasha aysan sheegin si cad. Tusaale ahaan, Qualcomm waxay bixisaa tiknoolajiyada Awood-qabashada Awood-galka ee dekedda USB-C ee aan shahaadayn.
isku xira USB-C wuxuu taageeraa USB 3.2 Gen1 hababka Gen2 maanta (yeedhay SuperSpeed ​​SuperSpeed ​​iyo +) in lagu dhawaaqay xilliga dayrta 2017 iyo, sida laga soo xigtay habaynteeda xogta loo isticmaalo, ka dhigi kartaa xawaalad 20 Gbps. Qoraalkii USB Gen 3.2 1 2 iyo Gen lihin USB gadaal iyo USB 3.1 2.0 oo ay taageerayaan ku Win 10, Mac OS X iyo Linux.
USB 4 wadada isku xiraha guud iyo 40 Gbps oo leh Thunderbolt iyo USB-C
Ka dib MWC bishii hore ee Barcelona, ​​USB-IF ayaa ku dhawaaqdaywaa qaaska ah ee jiilka xiga USB oo ay ku jiraan naqshadaha, ku salaysan qaylo, dhameystir doonaa oo dheeraad ah naqshadaba jira on USB iyo USB 3.2 2.0 iyo bandwidth double ah in la kordhiyo waxqabadka ee USB-C ". Macluumaadka USB 4, iyo sidoo kale cusbooneysiinta USB-C ayaa lagu faahfaahin doonaa dhicitaanka xilliga dayactiraha USB-ga. 4 USB ku salaysan USB-C Xidhiidhiyayaasha hodan noqon doonaa socon dib oo dhan versions hore ee USB iyo qaylo 3, marka laga reebo 1 iyo 2 qoraalkii cadaab daran. Iyada oo la isku xiro USB-C, waxaa suurtogal ah in lagu xiro xiriiriyaha kale ee USB ama 3 Thunderbolt, iyada oo aan daruuri ahayn helitaanka xawaaraha ugu sareeya ee USB 4. Inta badan ee dunida Apple hadda waxay noqon kartaa 4 USB ku habboon.
Iyada oo labajibbaaranaya xawaaraha xumbaha ee 40Gbps, qaybta ugu wayni waxay noqon doontaa hirgelinta maaraynta wareegga firfircoon ee dhammaan qalabyada ku xiran baska kaliya. Taasi waa, xadhigga xawaaraha mar dambe lama qeybin doono dhammaan qalabka la isku xidhan yahay, laakiin waxaa loo qoondeeyn doonaa iyada oo ku saleysan sifooyinka qalab kasta. Tusaale ahaan, gudbinta 4K video ah leeyihiin bandwidth badan gudbinta podcast ah iyo haddii 10 a isku xira Gigabit Ethernet, si loo kordhiyo fursadaha qalab kasta oo la iska ilaaliyo "kharribaad" xawaaraha badan ee qalabka wax ka qabta. Waxay sidoo kale aqbali doontaa Gaadiidka Korantada iyo Muujinta. Xawaaraha 40 Gbps waxaa laga helayaa cabirada keliya ee la adeegsanayo USB-C.
Dukumiintiga ugu dambeeyay oo Intel lagu magacaabo " Thunderbolt 3 meel kasta Intel ayaa sheegay in ay Thunderbolt 3 ka dhigayso mareegaha dadweynaha, in ay sii deyn doonto sifooyinka sanadka soo socda iyo in ay ku darayaan in ay ku xiga ee CPUs soo socda si kor loogu qaado korsashada iyo sidoo kale in USB-C. Dokumentiga aan sheegin USB 4 wuxuu sharxayaa: " Waxaan ku aragnaa mustaqbalka halka ay ku xiran tahay calaamada kaliya ee halbeegga sare, fiidiyowyada 4K iyo sawirro tayo sare leh, oo u dhaw xaqiiqda muuqaalka runta ah, iyo xitaa xawaare ka dhaqso badan maanta, waxay noqotay meel caadi ah. Dunida oo ah xiraha USB-Cda oo dhan oo dhan, maanta iyo waqti aad u dheer ". Wuxuu soo gabgabeeyay: " Thunderbolt 3 wuxuu noqonayaa qayb muhiim ah oo ka mid ah adduunkeena dijital ah adoo abuuraya adduun fursado". Laakiin neefkeena ku hay ilaa inta ugu dambeysa ee lagu dhawaaqayo USB 4. Ma jiri doonaa daqiiqad ugu dambeeya ee soo noqoshada ...? Intel iyo Apple ayaa mar horeba loo isticmaalay in ay la yaabaan sida tan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore: https: //www.presse-citron.net/usb4-arrive-bientot-how-retrouver-dedale-usb/
Waa kuwan codsiyada macOS ee waa in lagu beddelo iTunes
Kiniiniga funkku leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa gudaha dhismaha!